#संविधान Archives - Left Review Online
आज : २०७६ मंसिर २७ गते शुक्रवार
संविधानले अबको अर्थ राजनीतिको दिशा समाजवादको यात्रा हुनेछ भनेर प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ । अब नेपालमा समाजवादमा जाने बाटो के हो ? नेपाली अर्थ राजनीतिमा दलाल पुँजीवाद हावी हुँदै गएको स्थितिमा कसरी समाजवादको यात्रा तय होला ? आज सर्वत्र चासो र जिज्ञासा हुन थालेको छ । समाजवादी...बाँकी
#दलाल पुँजी#दलाल पुँजीवादबाट समाजवादको यात्रा#नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)#संविधान